ဗဟုသုတ – Page2– Alanzayar
နွားမကြီးခမျာ ဝယ်တဲ့နေ့ကစပြီး အစာမစားပဲ မျက်ရည်တွေနဲ့ အော်ပဲအော်နေလို့ အရင်ပိုင်ရှင်အား မေးကြည့်တော့မှ ဦးဝင်းမောင် တစ်ယောက် ညနေကျောင်းဆင်းချိန်တွင် သားဖြစ်သူပြန်လာမှာကို တွေးပြီး စိုးရိမ်နေမိသည်။”ဖေကြီးရေ ဖေကြီး” ဟော သားပြန်လာပြီ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သားငယ်ဖြစ်သူ၏ မျက်နှာလည်းမကောင်း သားဖြစ်က ရုတ်တရက် ဖေကြီး ဒီနေ့ ညိုညို လာလည်းမကြိုဘူး အိမ်မှာလည်းမတွေ့ဘူး ဖေကြီး ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ သားဖြစ်သူ၏ မေးခွန်းကို …
ကလေးတွေကို ဒီဟာ လုံးဝ ပေးမစားပါနဲ့…
ကလေးတွေကို ဒီဟာ လုံးဝ ပေးမစားပါနဲ့… ယနေ့အိမ်အနားဝန်းကျင်းက ကလေးနှစ်ယောက် စားသုံးနေတာတွေ့ရတော့၊ ပုံပါအတိုင်း စက် ဘီးကျွတ်သဖွယ်ကို ကိုက်ဖြတ်စားသောက်နေ၏။ ဒီတော့ကလေးအနားသွားပြီး ဘာတွေစားနေတာပါလိမ့်သမီးလေးတို့အဘကိုခဏပြပါလားဒါတွေဘယ်လောက်ပေးရသလဲ မေးတော့ ၊ (၈) နှစ်သမီးလေးကလေးခုကိုတစ်ရာပါ တဲ့ သူတို့စားနေတာကို ကြည့်ပြီး အန္တရာယ်များတာကိုတွေ့ရပြီး လူသားမျိုးနွယ်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှာကိုတွေးကြောက်လေသည်။ ထို့အပြင် လူမမည်ကလေးတွေ အသက်အန္တရယ်ဖြစ်စေတတ်သော Plastic Chemically compound ပြု့လုပ်ထား သည်ကိုဝါးစားနေတာမြင်ရတော့စိတ်မချမ်းသားဘူး။ …
သေနတ်ပြီးသော_ဆရာတော် ” နွားသား မစားရ ” ဆိုပြီး နွားမေတ္တာစာ တရားတွေ ဟောကြားလို့ အမဲသတ်လိုင်စင်သမားက လူငှားပြီး လယ်တီဆရာတော်ကို အသတ်ခိုင်းပါတယ်။ လယ်တီဆရာတော်က တရားပွဲမှာ ပလ္လင်ပေါ်ထိုင်ပြီး တရားဟောနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငှားရမ်းထားတဲ့ လူသတ်သမားက လယ်တီဆရာတော်ကို ချိန်ရွယ်ပြီး ပလ္လင် အနားကနေ သေနတ်နဲ့ အနီးကပ် ပစ်ပါတယ်။ သေနတ်သံက. ဒိုင်းကနဲ ထွက်သွားပြီး …
မြန်မာတွင်သာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာပါပထမဦးဆုံးဖြစ်လာမည့်ထန်းလျှော်ဖြင့်ရက်လုပ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီး…. မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာပေါ် တွင်ပါ ပထမဆုံးဖြစ်နိုင်သည့် ထန်းလျှော် ဖြင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ရက်လုပ်နေကာ ပြီးစီးလုအခြေအနေကို ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါရုပ်ပွားတော်ကို ရက်လုပ် ပူဇော်နေသူများထံက သိရသည်။ အဆိုပါရုပ်ပွားတော်ကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ နယ်၊ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ တိုက်သစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်း ထားရှိရက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကာ လောကမာရ ဇိန်ထန်းဘုရားကြီးဟု ဘွဲ့တော်သတ်မှတ် ထားပြီးဘုရား၏ ဉာဏ်တော်မှာ …
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဒီလိုတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီလား (ဘုရားပေါ်တောင် မရှောင်) မြန်မာလို့တောင် ခေါ်လို့ရပါတော့ မလားဗျာ။ ဒီလောက်ထိ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက်နဲ့ ဘုရားရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာဘုရားက တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေကလည်း ဒါမျိုးကို တားမြစ် သင့်ပါတယ် လူကြီးသူမတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ လာနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ဒီလို ပို့စ်မျိုး ပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းရုပ်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ရေကူးကန်တို့ ပါတီတို့၊ …
မိသားစု ၆ ယောက် အား ကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ(အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
မိသားစု ၆ ယောက် အား ကယ်တင်ခဲ့သော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ(အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ) ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် တို့တွက် ထူးခြား မှုဖြစ် အံ့ဖွယ်ဖြစ် ရပ်ပါ.. (မိသားစု ၆ယောက် အားကယ်တင် ခဲ့သောရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ)မိသား စု လိုက် ခ ရီး သွားရာကား ဘီးပေါက် လို့ ဆင်းကြည့် တဲ့ အ ခါ …
ဘဝရဲ့အိမ်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မဆောက်လုပ်မိပါစေနဲ့
ဘဝရဲ့အိမ်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မဆောက်လုပ်မိပါစေနဲ့ တခါတုန်းက လက်သမားဆရာ တဦးဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလို့ အလုပ်က အငြိမ်းစားယူဖို့ ပြင်ပါတယ်။ ဒါကို အလုပ်ရှင် ကန်ထရိုက်က သိတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွဲ လုပ်လာကြ တဲ့ သူတွေမို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ် အဲ့ဒါနဲ့ပဲ လက်သမားဆရာကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အိမ်တလုံးလောက် ထပ်ဆောက်ပေးနိုင်မလားလို့ တောင်းဆိုတယ်။ လက်သမားဆရာကလည်း မငြင်းသာလို့ …
အောင်မြင်သူနဲ့ ရှုံးနိမ့်သူရဲ့ ကွာခြားချက်
အောင်မြင်သူနဲ့ ရှုံးနိမ့်သူရဲ့ ကွာခြားချက် တခါတုန်းက အရမ်းကို ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ကို အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ သနားပြီး သူ့ကို ကြီးပွားလာအောင် ကူညီချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်သူဌေးက သူ့ကို နွားတစ်ကောင်လ က်ဆောင်ပေးခဲ့တယ် သူ့ကို လယ်ယာထွန်ယက်ဖို့ သေ ချာမှာခဲ့တယ်အခုချိန်မျိုးစေ့ ကြဲထားပြီး ကောင်းကောင်းထွန်ယက်ရင် ဒီနှစ်ကုန်ရင် ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ဝေးဝေးခွာနိုင်တော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့တယ် ဒီသူဆင်းရဲလေးကတော့ အစပိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ …
မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ရှိနေလျှင်
မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ရှိနေလျှင် မင်္ဂလာ ပါနော် မျက်နှာပေါ်က အမည်း စက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ကင်းစင်ပြီး အသားအရေကို စိုပြေ လာစေ မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေ ကို ဒီတခါ မျှဝေပေး သွားမှာဖြစ် ပါ တယ်။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မရှိတဲ့ သဘာဝ နည်းလမ်းမို့ စာဖတ် သူတို့ သဘော …
ခတျေသဈမိနျးမပကျြ (၃၅)မြိုး ခေတ်သစ်မိန်းမပျက် (၃၅)မျိုး ၁ ယောက်ျားမကောင်းကြောင်းကိုFb ပေါ်တွင်ချချရေးသောမိန်းမ ၂ တခြားယောက်ျားတွေကောင်းကြောင်းကိုFb ပေါ်တွင် share သောမိန်းမ ၃ အိပ်လျှင်ယောက်ျားဖက်လှည့်အိပ်ပြီးကျယ်လောင်စွာဟောက်တတ်သောမိန်းမ ၄ ညဘက်သွားတိုက်မအိပ်သောမိန်းမ ၅ယောက်ျားကိုပေါ်သမျှအလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ခိုင်းသောမိန်းမ ၆ညဖက်အချိန်မတော် အရပ်တကာလှည့်လည်သွားလာသောမိန်းမ ၇ တနေကုန် TV ကြည့်သောမိန်းမတနေကုန် ဖုန်းနှင့်မျက်နှာမခွာသောမိန်းမ ၈ တနေ့ပြီးတနေ့ ရောဂါတမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်ပြီးလင်ရှာသမျှ ဆေးကုနေရသောမိန်းမ ၉ တနေ့ …